Forum serasera malagasy Resaka momba ny soatoavina - Dinika forum.serasera.org
Resaka momba ny soatoavina
Fitohizan'ny hafatra : Resaka momba ny soatoavina
hery - 10/03/2019 11:38
Tsy vao tato ho ato fa efa hatramin'izay dia matetika rehefa te hiteny ohatra sy zavatra tsara ny mpanohana hevitra iray dia asiana hoe araka ny Soatoavina malagasy na hoe tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy izany.
Fa ny vaovao heno farany izao dia ny mikasika ny sivana ankolaka mikasika ny dihy, kolom-body, hira sns hoe misy amin'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny soatoavina. Ny DG vaovao, Francis Turbo, aza moa, izy izay mpanao blagy masira hatramin'izay, dia niteny hoe tsy zakan'ny malagasy ireny zavatra ireny... angamba ny boridandridana no tiany lazaina.
Azo ifandaharana ny resaka hoe tsy zakan'ny gasy sa zakan'ny gasy, satria mantsy betsaka ny mieritreritra ny any ambanivohitra hoe tsy mahazaka an'izany sns... kanefa indraindray ny any ambanivohitra mihitsy no tena gravy amin'io afera io rehefa kifetifety.
Fa tsy izay no resaka, fa ilay hoe soatoavina. Atao ohatra foana ny Ntaolo, kanefa ny Ntaolo koa mba nanana ny maha izy azy izay matetika tsy azo atao modely mihitsy. Anisan'izany ny fomba fampirafesana, ny mosavy, na dia teo koa aza ny fihavanana dia anisan'ny nanjanaka (ankolaka sns) Andrianampoinimerina... Izany hoe tsy azo atao safobemantsina hoe tsara foana ny nataon'ny Ntaolo ka dia soatoavina foana. Tsy mino aho hoe tena référence ny Ntaolo amin'ny hevitra mikasika ny moraly mikasika ny sexe sns.
Koa amiko dia tsy azo hanohanana hevitra amin'ny resaka ara-moraly tahaka ireny ny soatoavina malagasy. Mety amiko kokoa raha lazaina hoe araka Soatoavina Kristianina satria soatoavina kristianina ireny tiana hapetraka ireny.
Ny olana fotsiny dia Repoblika Lahika ity repoblika ity kanefa te hampihatra soatoavina kristianina. Mety be amiko ilay izy saingy tsy mifanaraka fotsiny amin'ny maha lahika ny repoblika.
Dreamlover14 - 07/03/2019 16:55
Mitovy fijery @ Hery aho amin'io. Arakaraka ny faritra koa io fa raha Antananarivo no tsy mahazaka kolombody, any @ faritra tsy tia hira miangolangolan'ny afovoan-tany ka dia sarotra ny manatontolo hoe tsy mety @ soatoavina malagasy.
Ny zavatra niainako raha nianatra dihy malagasy t@ mpanao vakodrazana iray izay izahay (Tarika Veromanitra) fony tena tanora (20 taona) dia bediny mihitsy izahay raha vao manetsiketsika fitombenana ary nolazainy hoe tsy nisy dihy malagasy mampandihi fitombenana mihitsy fa nolovaintsika t@ kolontsaina afrikanina ireny. Izany hoe tsy nisy teo @ malagasy nifindra monina teto hono fa nony nisy ny fifandraisana t@ ireo firenena afrikanina no nanomboka nianarantsika (indrindra tany @ faritra andrefan'i madagasikara) ny dihy mampandihy fitombenana.
Toy ny olombelona, fiteny, sns... ilay soatoavina dia mipoitra, miaina, mivoatra ary mety ho faty tsikelikely arakaraka ny vanim-potoana. Anjarantsika no manasongadina ny hoe inona no tiantsika holovain'ireo taranatsika, kolombody ve sa misy tsaratsara kokoa.
Ilay fiezahana hanilika ny kristianisma miditra @ fanjakana kanefa te-hametraka ilay soatoavina Kristianina no tena hitako ho olan'ireto mpitondra ankehitriny dia amboamboarina @ ilay soatoavina malagasy.
Tantara farany, ny mpivaro-tena teto iarivo hono fahiny tsy manao akanjo sexy fa jupe lava fa ny maso no manao signe hoe vonona aho raha ho avy enao
RUZ9 - 23/04/2019 11:28
Ny resaka miboridandridana aloha,
Hiakanjo ihany izy rehefa tsy misy mijery na tsy lafo ny album.
Fa matoa be ny mpihira sy mpandihy miboridana, be ny maso liana.
Tsy hilaza aho hoe mety ilay izy na tsy mety.
Fa raha hanakiana aho, ilay hira somary manindrahindra rongony, na misarika ny hafa handray rongony, tsy tokony avela hivoaka amin'ny haino aman-jery.
Tanora no be mpankafy an'ireny, ary dokam-barotra vita ho azy ireny.
Raha tsy hosivanina ireny, very maina ny ezaka atao amin'ny fanenjehana ny mpivarotra rongony.
Ny tononkira azo ovana, ary heveriko fa tsy olana angamba.
Hevitra moa ny ahy, raha mety, hevitra, raha tsy mety havitra.
Fa mety hiresaka demokrasia indray izao izay hamaly an'ity.
Ka hoy aho, mba hanao demokrasia izahay ry ministeran'ny kolontsaina, ka mba sokafy ho anay pejy facebook-nareo.